Buug Faaqidid (Book Review) « HiilDan.Com
Buug Faaqidid (Book Review) MA NAXE: Dareen iyo Dar-daaran
By hiildan on March 11, 2010	• ( 5 )
“Waxaan dadkayga u rajaynayaa in ay baraarugaan, naftoodana xoreeyaan, kana gilgishaan fool xumada ka muuqata dushooda, maan koodan gumeeysigu kaga turqay irbada sunta ah aay dawo u raadsadaan, taas oo ah in Ilaahay tiisa loo soo noqdo toobadana laga tegin, lana… Read More ›
SHAQSIYADDII MAXAMED SIYAAD BARRE (AUN)
By hiildan on August 6, 2009	• ( 5 )
By Muumin Cumar Dila Shaqsiyaddii MSBarre marka si kooban loo qeexo, wuxuu lahaa laba sifo oo iska soo horjeeda oo aad u kala tagan. Wuxuu lahaa samaan iyo xumaan iskudhafan. Wuxuu ahaa xariif midabyo badan oo aan lahayn meel loogu… Read More ›
Buugga ‘MA NAXE’: Dood Furan
By hiildan on May 14, 2009	• ( 66 )
Dagaalkii Ciise iyo Gadabuursi, Saamayn Intee le’eg Ayuu ku yeeshay Salddannaddii Gadabuursi ee Jabuuti Ka Talin Jirtey?
By hiildan on April 30, 2009	• ( 2 )
“Sida keentay Maxad-casuhu in uu meelna xubin ka noqon waayo ama xildhibaan waa talo xumo dhexdooda ka dhacday, oo kursigii maxad casuhu lahaa waxa isku qabtay Abreyn iyo Bahabar Muuse. Markay muddo shirayeen waxa u suurtoobi weyday inay isku daystaan… Read More ›
Djibouti: Mujaahidiintii Samarroon, ee La Jihaaday Faransiiska
By hiildan on April 27, 2009	• ( 23 )
Wali waxaynu ku guda jirnaa faaqidaada buuga maamuuska badan ee MA NAXE, iyadooy innoo hadheen guud ahaanba halgankii xorriyadda Jabuuti iyo Mujaahidiintii ka qayb qaatay Jihaadkaas ee Soomaali iyo Canfar iyo Caraba intaba isugu jirtay. Iyo ugu danbayn dardaarankii qiimaha… Read More ›
Dagaalkii Ciise vs Gadabuursi: Djibouti 1948 -1949
By hiildan on April 24, 2009	• ( 49 )
“Waar Niman yahow ma og tihiin inaan anigu kuwaa i dilay iyo idinkaba aan madax u ahay, oo an sidaa darteed idin weydiisanayo in sida wajigiina ka muuqata aanay wax u dhicin”. JAAMAC SAYLICI (AUN). Qoraaga buugga MA NAXE, Marxuum Mujaahid… Read More ›
Samarroon Halkuu Kaga Jiray Taariikhdii JABUUTI?
By hiildan on April 18, 2009	• ( 89 )
“Magaalada Makaahiilku Wuu ku badnaa, laakiin waxa magaalada ka socda waxba kama ogayn, waxna kama ahayn. Labada reer ee kale ayaa maqaaxida iska shidanayay” Wali waxaynu ku guda jirnaa faaqidaada buugga MA NAXE, ee uu qoray ‘Marxuun Mujaahid Cumar Baqare… Read More ›
MA NAXE: Qaybta Koowaad
By hiildan on March 27, 2009	• ( 0 )
“Waxaanan dadkayga u rajaynayaa in ay baraarugaan, naftoodana xoreeyaan, kana gilgishaan fool xumada ka muuqata dushooda, maankoodan gumeysigu kaga turqay irbadda sunta ah aay daawo u raadsadaan. Taas oo ah in Ilaahay tiisa loo soo noqdo, toobadana laga tagin lana… Read More ›
Dal Dad Waayay(Book Review).
By hiildan on March 5, 2008	• ( 0 )
Dal Dad Waayay iyo Duni Dammiir Beeshay – By: Maxamad Daahir Afrax Waxaynu horey idiinku soo gudbinnay hordhaca buugan isaga ah iyo himiladeena oo ah inaynu faaqidaad kooban ka bixino. Sidii an horey idiinku war galinayna, waxaynu buugan u faaqidi… Read More ›
Dal Dad Waayay (Book Review).!
By hiildan on February 24, 2008	• ( 0 )
Dal Dad Waayay iyo Duni Dammiir Beeshay. BY: Maxamad Daahir Afrax. Mawduuceena maanta ee Wargeyska HiilDanExpress wuxu ku saabsanyahay, faaqidida buuga bilicda iyo barashada leh, ee u qoray Maxamad Daahir Afrax oo ah qoraa weyn oo caan ku ah bulshoweynta soomaaliyeed ee… Read More ›
Blog Stats	1,204,858 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)